khinlay's Page - Myanmar Network
Programmer (၅) မျိုး
Posted by mgpyone on September 13, 2010, filed in:…Continue
မိုဃ်းဇော် သေတမ်းစာ ကဗျာစာအုပ်မှ
Started this discussion. Last reply by May Myat Swe Jun 3, 2011.2Replies0Likes
သားရေ ငိုသံတွေကို လမ်းခင်းပြီးမှ မင်းရဲ့နန်းတော်ကြီးဆီ ရောက်မယ်ဆိုရင် အဲဒီလမ်းကို မလျှောက်လေနဲ့။ မိုးလောက်ကြီးပဲ မြင့်ပါစေ လူတွေရဲ့ ပခုံးကို တက်နင်းပြီးမှ မင်းဘ၀ အထက်တန်းကျမယ်ဆိုရင် အဲဒီအမြင့်ကိုလည်း မလှမ်းလေနဲ့။ မင်းရဲ့ ယုံကြည်ချက်ကြောင့်…Continue
Started this discussion. Last reply by Wai Thet Htet Oo Feb 25, 2015. 32 Replies 26 Likes
Programming နဲ့ပက်သက်ပြီး လေ့လောနေဆဲဖြစ်တဲ့ Beginner များ သိထားသင့်တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်အချို့ကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဒီလျှို့ဝှက်ချက်တွေကို မသိလို့လမ်းပျောက်နေသူ၊ စိတ်ပျက်နေသူ ပရိုဂရမ်မာ အများအပြားကို တွေ့ဖူးတဲ့အတွက်အခုလိုပြောပြရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။…Continue
Started this discussion. Last reply by kyaw zay win Apr 8, 2010.9Replies0Likes
ဘွဲ့နှင်းသဘင်တစ်ခုမှာ ဘွဲ့ရကျောင်းသားတွေအတွက် ဘီလ်ကိတ်ကဒီလိုအကြံဥာဏ်ပေး ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။( ၁) လူ့ဘဝက မမျှတဘူး။ ဒါကို လက်ခံနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။၂) ဒီလောကက ကိုယ့်လေးစားကြည်ညိုမှုကို အသိအမှတ်ပြုမှာ မဟုတ်ဘူး။အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အရင်လုပ် ပြီးမှ…Continue
khinlay has not received any gifts yet
At 16:49 on January 31, 2011, Soe Thiha said…
Hi Khin Lay,
At 15:51 on May 29, 2010, patricia said…
how are u?i want to be ur friend.
At 22:05 on March 20, 2010, ma khaing said…
At 13:36 on February 4, 2010, Zaw Zaw Aung said…
Pls accept my invitation, i also want to share IT Knowledge each other, zaung73@gmail.com.